Maxay Ahayd Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Maanta David Beckham U Booqday Xarunta Tababarka Tottenham Ka Hor Finalka Chamions League? - Gool24.Net
Maxay Ahayd Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Maanta David Beckham U Booqday Xarunta Tababarka Tottenham Ka Hor Finalka Chamions League?
Halyaygii hore ee xulka qaranka England iyo kooxda Man United ee David Beckham ayaa marti lama filaan ah ku noqday tababarkii maanta ee kooxda Tottenham ee ka hor finalka Champions League.
Jamaahiirta kubbada cagta ayaa markii ay arkeen sawirada David Beckham oo waqti la qaadanaya ciyaartoyda Tottenham waxay waxay soo bandhigeen fikrado kala duwan oo ay dareenkooda ku cabireen.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Tottenham iyo Man United ayaa soo bandhigay in booqashada David Beckham ee xarunta tababarka Tottenham ay ahayd in uu dhiiro galin siiyo isla markaana uu talo ka siiyo finalka Champions League ee Liverpool.
Qaar kale oo taageerayaasha Man United ah ayaa dareenkooda ku cabiray in sababta David Beckham ay ahayd in uu qabanayay shaqo la xidhiidha Man United balse waxaa la ogaaday sababta dhabta ahayd ee uu David Beckham maanta waqti ula qaatay Tottenham.
Sida uu xaqiijiyay wargayska Daily Mirror, David Beckham ayaa xarunta tababarka Tottenham maanta booqday iyada oo shabta dhabta ahi ahayd in uu heshiis kula jiro shirkada AIA Group oo ah isla shirkada maal galisa maaliyada Tottenham.
Hawsha ganacsi ee Tottenham iyo Beckham kula jiraan shirkada AIA Group ayaa noqotay sababta dhabta ahayd ee keentay in David Beckham uu maanta waqti tababarka kula qaatay ciyaartoyda Tottenham iyo cadowgiisii koobka aduunka 2002 ee Pochettino.
Harry Kane ayaa sawirkiisa iyo kan David Bekham waxa uu soo raaciyay: “Way fiicnayd in aan maanta waqti la qaatay David Beckham. Halyay dhabta oo ciyaaraha ah”.
Laakiin David Beckham ayaa isna soo qoray: “Way fiicnayd in aan maanta waqti la qaatay Mauricio. Waad ku mahadsan tahay in aad aniga i soo dhawaysay isla markaana aad i tustay xarunta tababarka cajiibka ah”.
Pochettino iyo ciyaartoyda kooxdiisa Tottenham ayaa diyaar garow wayn ugu jira finalka UEFA Champions League ee ay Liverpool kula ciyaari doonaan Madrid.